[सुवास नेम्वाङसँग अन्तरवार्ता] आकाश-पाताल फरक भएका दलले त गठबन्धन गरे, समान विचार भएका दल मिलेर जान के असम्भव छ र ?
अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा एमाले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेस पहिलो हुन पुगेको तर्क गर्ने एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ तमाम घेराबन्दीका कारण पनि एमाले दोस्रो स्थानमा रहन सक्नुलाई पार्टीको विजयका रूपमा लिन्छन् । उनी अगाडि भन्छन्, ‘गठबन्धन गरेर जानु नै उहाँहरूको पहिलो पराजय थियो, त्यसमाथि पाँचदलीय गठबन्धनले नपुगेर अन्य दलसमेत जोड्दा पनि एमालेलाई दोस्रो स्थानभन्दा तल झार्न नसक्नु उहाँहरू थप पराजित हुनु हो । एमालेसँग एक्लाएक्लै निर्वाचन लडेर विजय हुने हिम्मत त रहेनछ भनेर यो निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।’ उनै नेम्वाङसँग निर्वाचन, निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय तहमा एमालेले नमज्जासँग पराजय भोग्यो नि ? यो हालतमा पुगिन्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
सिटको संख्या हेर्दा त तपाईंले भनेको सही हो । तर, खासमा जनमतको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भन्ने एमाले थप शक्तिशाली भएर आएको छ । त्यो तपाईंहरूले निर्वाचनको परिणामको विश्लेषण गर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ ।
त्यो त चित्त बुझाउने कुरा होला । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधि त तपाईंको पार्टीबाट नै हुन सकेनन् । धेरैजसो त कांग्रेस र माओवादीको भएको देखियो । मुख्यतः जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने कुरा होला नि ?
यसलाई भोलिका दिनमा जनताले हेर्ने नै छन् । तर, याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय प्रणालीमा सत्तारूढ दलले कहिल्यै पनि गठबन्धन गरेर जाँदैन । गएको इतिहास पनि छैन । गठबन्धन गर्ने भनेको त प्रतिपक्ष दलले हो । झन् यो संसदीय प्रणालीको हिमायती भन्ने कांग्रेस नै एमालेसँग डराएर गठबन्धनमा गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त सुरूमा नै ऊ ‘डिफेन्स’मा पुगेको भन्ने अर्थमा बुझिनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा त पाँच दलको गठबन्धनले समेत नपुगेर राप्रपालाई समेत जोडेर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको एमालेको त स्वतः विजय नै हो । भलै, त्यो सिटमा देखिएन । त्यसैले म भन्छु– यो निर्वाचनले एमालेको जनमत घटेको छैन । सबै दललाई ‘डिफेन्स’मा राखेर एमालेले आफ्नो जनमत थप सुदृढ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट हामी आत्तिएका छैनौँ । बरु थप
शक्तिशाली भएर एमाले आएको छ ।
सिट जति त अरु दलले कब्जा गरिसके । आत्तिएको छैन भन्नु त मनको लड्डु घिउसँग खाए जस्तो भएन र ?
ल तपाईंले भनेको मानेँ । उहाँहरूको जित भयो । तर, त्यसरी जित हासिल गर्दै गर्दा यो चुनावले कांग्रेससको जनमत कति छ ? माओवादीको कति छ ? एकीकृत समाजवादीकाे कति छ ? पहिचान भयो त ? पहिचान त हुन सकेको छैन । यो निर्वाचनबाट कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको जनमत देख्न पाइएन । किनभने सबैले सबैलाई भोट हालेका छन् । तर, एमालेको जनमत कति भन्ने त यस चुनावले देखाइसकेको छ । उहाँहरू आफ्नो जनमतसम्म देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । जनमत पहिचान गर्ने अवस्थामा नै पुग्नसक्नु भएको छैन । एउटा राजनीतिक दलको यो भन्दा बेहाल अरू के हुन सक्छ ?
भनेपछि एक्लाएक्लै चुनाव लडेको भए यो निर्वाचनबाट एमाले पहिलो पार्टी हुन्थ्यो ?
यो त जनमतले नै देखाइसक्यो त ? देखाएन र ? एमालेलाई सारा घेराबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर जानु भनेको सुरूमा नै राजनीतिक रूपमा पराजय हुनु हो । त्यसले पनि नपुगेर कुनै पनि पार्टीका सभापति होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले आमसभामार्फत् गठबन्धनलाई जिताउनु जनताको कर्तव्य हो भनेर भाषण गर्नुभयो । एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत गठबन्धनलाई जिताउन जनतालाई दबाब दिनुभयो । खासमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट भन्नुपर्ने कुरा यति मात्र थियो– स्थानीय तहको निर्वाचनमा डर, त्रास र भयरहित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले रोजेको पार्टीलाई जिताउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । तर, उहाँले त्यसो नभनेर गठबन्धन आबद्ध दललाई जिताउनु जनताको कर्तव्य हो भनेर गठबन्धनको पक्षमा मत माग्नुभयो । देशको अभिभावक मानिएको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न मिल्छ ? तर, उहाँले निर्वाचनको दौरानमा मन परेका पार्टी रोज्न पाइँदैन, जसरी पनि गठबन्धनलाई मत दिनुपर्छ भन्ने आशयसहित पदीय मर्यादा नै भुलेर निर्वाचनमा जानुभयो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसारमा यसरी मत माग्छन् । मैलेचाहिँ त कहीँ कतै थाहा पाएको छैन ।
यो त घाम जत्तिकै छर्लङ छैन र ? यो त सबैले सहजै बुझ्ने कुरा हो । त्यत्रो गठबन्धन गर्दा पनि एमालेसँग पराजय हुने डरले पो हो कि के हो एकजना नेताले त, म नाम भन्दिनँ । तर, उहाँले त ‘गठबन्धनलाई मत नदिए देश दुर्घटनामा पर्छ’ भनेर जनतालाई धम्क्याउनु नै भयो । छोरीलाई जिताउनका लागि मत नदिए देश दुर्घटनामा पर्ने अनि दिए मात्र देश दुर्घटनाबाट जोगिनेसम्म कुरा गर्नुभयो ।
जनतालाई धक्क्याएर मत माग्ने काम शीर्ष नेताले मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीपत्नीले समेत गर्नुभयो । जिताएको अवस्थामा स्थानीय पालिकामा पैसा पठाउने, नजिताए नपठाउनेसम्म भन्नुभयो । जिताउने परिवारलाई मलेसिया हो कि साउदी अरब पठाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीपत्नीले त्यो भूमिकामा बसेर यस्तो बोल्न मिल्छ ? तर, बोलिदिनुभयो । त्यति मात्र होइन, निर्वाचनपछि पनि राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर एमालेलाई एक्ल्याउने काम गरियो । पार्टी महासचिवले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनिसक्नुभएको छ । तसर्थ, म भन्छु– एमालेको केही सिटमा तलमाथि भयो होला, तर जनमत घटेको छैन । बरु, एमालेले एक्लैले अरू दललाई यो निर्वाचनमार्फत ‘डिफेन्स’मा राखिदिएको छ ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली (मिश्रित)ले गठबन्धन गरेर नगए एकल बहुमत आउँदैन भन्ने देखाएको छ । तर, एउटै राजनीतिक विचारधारा भएका दलसँग गठबन्धन गरेर गएको भए पो सुहाँउदो हुन्छ । यो गठबन्धनले त को कम्युनिस्ट ? को कांग्रेस ? को मधेस केन्द्रित दल ? को राप्रपा ? छुट्याउने अवस्था नै देखिएन ? सबै गोलमाल देखिएको छ । जनमत गोलमाल नभएको भनेको त एमाले मात्रै हो । सिट त जितेका छन्, तर गठबन्धन दलहरूलाई त आफ्नो शक्ति सार्मथ्यै नै कति छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरू अलमलमा छन् ।
एउटा घटना स्मरण गराउँछु– ०४७ सालपछि पञ्चहरूलाई अझ कमजोर बनाउन र पराजित गर्न फेरि सँगै लडेर जानुपर्ला कि भन्ने थियो । जननेता मदन भण्डारीले कांग्रेस नेताहरूसँग प्रस्ताव गर्दै गर्दा मलाई अझ पनि सम्झना छ कि किसुनजीले भनेका थिए, ‘०१५ सालमा चार सिट पनि नजितेका ‘कम्युनिस्ट भैया’हरूले १५ सिट जिते मात्र पनि खसी काटेर खुवाउँछु । एक हजार सिटले त कांग्रेसलाई पनि पुग्दैन ।’ यति भनेपछि खाएको पान थुक्नुभयो । पछि जनमत कसको कति रहेछ भन्ने त अर्को निर्वाचन परिणामले नै देखाइदियो । एक हजार सिटले नपुग्ने भन्ने कांग्रेस कहाँ पुग्यो त ? त्यसैले जनमतलाई कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । त्यसैले सिटभन्दा जनमत ठूलो हो ।
सिट धेरै गुमिसक्यो । अब जनमत छ भनेर चित्त बुझाइरहनुभएको छ ?
एमालेलाई धुलो चटाइन्छ । चुनावपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भनेका होइनन् ? अहिले ‘रिजल्ट’ले त्यो देखायो ? पाँचदलीय घेराबन्दीका बीचमा पनि एमालेले सानदार विजय हासिल गरेको अवस्था छ । हामी अहिले पनि सानदारसहित एक्लै भए पनि दोस्रो ‘पोजिसन’मा छौँ । पहिलो भनिएको कांग्रेस त गठबन्धनसहित पहिलो ‘पोजिसन’मा पुगेको न हो, एक्लै पुगेको होइन । एक्लाएक्लै लडेको भए कांग्रेस पहिलो हुन सक्थ्यो र ? सक्दैनथ्यो । अब गठबन्धन नगरी चुनावमा जाऊन् त एमाले पहिलो हुन्छ कि दोस्रो ? त्यो त जनमतले देखाइसक्यो ।
सत्तारूढ दलले त स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्यौं भनिरहेका छन् नि ?
प्रतिगमन के हो ? हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नयाँ जनमतका लागि भन्दै निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेर जानुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । एकपटक त परमादेशबाट नै । तर, पनि हाम्रो पार्टीले कानुनी राज्य बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो । चुनावमा गयो । के ओलीजीले मात्रै संसद विघटन गरेको हो र ? त्यसअघि गिरिजाबाबुले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । मनमोहनजीले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । यो मुलुकमा ६/६ पटक संसद् विघटन भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर पनि छ । तर, ओलीजीले गरेको संसद् विघटनचाहिँ प्रतिगमन ? अनि अरूले गरेको चाहिँ अग्रगमन ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो ।
योभन्दा केही अरू देख्नुहुन्छ । त्यसपछि यो पनि बिर्सन हुन्न कि ओलीजीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्नेहरू आफैँ पुनः विघटन गर्न नलागेका होइनन् र ? स्थानीय तह निर्वाचन सारेर संघीय संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् र ? के संसद् विघटन नगरी संघीय संसद्को ‘अर्ली इलेक्सन’ हुनसक्थ्यो र ? त्यसैले संसद् विघटनको प्रस्ताव त सर्वोच्चको परमादेशबाट पछि पनि सत्तारूढ दलबाट आएको हो । हामीले बरु त्यसको ठाडो प्रतिवाद गर्यौं, कि संसद् विघटन गरे ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने सत्तारूढ दलको चाहनालाई अवरोध गरेर मुलुकलाई स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ होमायौँ । त्यसैले उनीहरूले गरे प्रतिगमन नहुने र अग्रमन हुुने अनि हामीले गरेर प्रतिगमन हुने ? यो त राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको विषय मात्रै हो । यसमा कुनै तुक छैन ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका त सबै एमालेले गुमाइसक्यो ?
अहिल्लो पटक हामीले महानगरमा काठमाडौं र पोखरामा विजय हासिल गरेका थियौँ । योपटक गठबन्धनका कारण हाम्रो पक्षमा मेयरका पक्षमा परिणाम आएन होला वा नआउन पनि सक्ला । मतगणना जारी नै छ । तर, हाम्रा उपमेयरहरूले सानदारका साथ विजय हासिल गरेका छन्, गरिरहेका छन् यो त भुल्नु भएन नि ? त्यो काठमाडौं होस् वा विराटनगर वा अन्यत्र । पाँचदलीय गठबन्धनलाई हराउँदै ‘कोर मधेस’ भनिने कलैयामा विजय हासिल गरेका छौँ । अन्त पनि हाम्रो त्यति अवस्था बिग्रिसकेको छैन ।
हाम्रो पार्टी तहमा यो कुरा भएको देखिएको छैन । केही साथीले गरिरहेका हुन सक्लान्, नहोला भन्न पनि सकिन्न । असम्भव छ र ? आकाश–पाताल नै फरक भएको र एक अर्कासँग विचार नै नमिलेका दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । हामी त झन् समान विचार भएका दलहरूसँग मिलेर जाने कुरा नहुन सक्छ र ? हेर्दै जाउँ ।
प्रकाशित मिति : जेठ ७, २०७९ शनिबार १८:५५:१९, अन्तिम अपडेट : जेठ ७, २०७९ शनिबार १९:२९:३२